‘अर्बपति’ प्रचण्डको कुरै नगरौँ :: लक्ष्मणलाल कर्ण (सहअध्यक्ष, सद्भावना पार्टी) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १५:१२ English
‘अर्बपति’ प्रचण्डको कुरै नगरौँ :: लक्ष्मणलाल कर्ण (सहअध्यक्ष, सद्भावना पार्टी)
० मधेसमा चुनावको चहलपहल कत्तिको छ?
– एकदम चहलपहल बढेको छ। मधेस सुगम ठाउँ भएकाले पनि मधेसवादी दलका अलावा अन्य दलका नेताहरू पुग्ने गरेका छन्। यसले चुनावी चहलपहल र चुनावी चर्चा–विचर्चा अलिक बढी नै छ मधेसमा।
० यस्तो अवस्थामा पनि मधेसी दल तथा नेताहरूबीच त कटुता, झगडा र विभाजनको मानसिकता देखिन्छ, यस्तोमा मधेसवादी दलहरूलाई जनताले किन मत दिने?
– पार्टी अलग–अलग भएपछि आ–आफ्नो नीति–रणनीति त हुन्छ नै, रस्साकस्सी त चल्छ नै। तर, चुनावका लागि मधेसी दलहरू आपसमा मिल्छन्, मिलिरहेका पनि छन्। मधेसवादी दलहरू मोर्चाबन्दीका लागि तयार छन्। आन्तरिक कुराकानी वा छलफल जारी छ। मधेसी दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य, नीति र कार्यदिशामा खास अन्तर नभएकाले मिलेर अघि बढ्ने कुरा असम्भव पटक्कै छैन। सैद्धान्तिक रूपबाट मधेसका उत्पीडन र शोषण हटाउने मधेसवादी पार्टीहरूको अभियान हो। यही अभियानअन्तर्गत नै मधेसी जनताले पनि एउटा सशक्त राजनीतिक दल खोजिरहेको अवस्था छ। यस यथार्थका कारण मधेसी दलहरू मिलेर अघि बढ्नैपर्छ। आगामी निर्वाचन मधेसी दलहरूले एउटा सिङ्गो मोर्चाकै रूपबाटै लड्नेछन्। एक साताभित्रै यसको परिणाम सार्वजनिक हुनेछ।
० मधेसी दलहरूबीच सहकार्य कसरी हुन्छ त, बताइदिनुस्न?
– निर्वाचनको उद्देश्य लिएर बिल्कुल सहकार्य हुन्छ। कसको कहाँ कति पकड छ भन्ने विश्लेषण गरीकन सिट मिलाएर सहकार्य र मोर्चाबन्दी हुन्छ। मधेसी जनताले पनि मधेसी दलहरूलाई एकताबद्ध हेर्न चाहिरहेका छन्। भरसक एउटै दल भएर आउनुस्, नसके एक क्षेत्रमा मधेसको एउटा मात्र उम्मेदवार दिनुस् भनेर जनताले भनिरहेका छन्। यस जनभावनाको मधेसी दलहरूले कदर गर्नैपर्छ, गर्नेछन्।
० केही समयअघिसम्म त सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफ्नो पार्टी एक्लै चुनावमा जाने दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भनेपछि अब सद्भावना पनि मोर्चाबन्दीमै जाने भयो?
– हो, पछिल्लो घटनाक्रम र परिस्थितिका आधारमा सद्भावना पार्टी पनि मोर्चाबन्दीमै जान्छ। यसको पहलकदमी हामीले लिइसकेका छौँ।
० तपाईंको पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि र विवाद त तीव्र रहेछ नि होइन?
– अलि–अलि विवाद, बहस, असन्तुष्टि नहुने अवस्था त रामराज्यमा पनि थिएन होला। चलायमान पार्टीमा यस्ता बहस चलिरहन्छन्, पार्टी गतिशीलताको यो प्रमाण पनि हो। तर, हाम्रो पार्टीमा व्यवस्थापन गर्नै नसकिने कुनै त्यस्तो विवाद र असन्तुष्टि छैन। जुन ठाउँमा जसले जित्ने सम्भावना देखिएको छ उसलाई विवाद नगरीकन टिकट दिनुपर्छ भन्ने मोटामोटी मान्यतामा सहमति भइसकेको अवस्था छ। यसले अन्तरपार्टी विवाद हल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। यतिबेला सद्भावना पार्टीप्रति अन्य पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको पनि आकर्षण बढ्दै छ।
० एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी दल र मधेसी नेताहरूको इमानदारी र नैतिकताप्रति तीव्र प्रहार गरेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ?
– प्रचण्डजी भनेको प्रहार गर्ने पार्टीका प्रहार गर्न मात्र जानेका व्यक्ति न हुन्। नेपाली जनतामाथि प्रहार गरी–गरीकन सत्रौँ हजारको ज्यान लिएर आएका उनलाई प्रहारको धित अझै मरेको छैन भने हामीले के भन्ने? उहाँको काम नै प्रहार गर्ने मात्र हो। उहाँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न, जे गर्नुहुन्छ त्यो बोल्नुहुन्न भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। सङ्घीयताको नाममा सत्र हजार मान्छे मारे अनि अन्तरिम संविधानमा त्यो छोडिदिए। मधेस प्रदेश आफँैले सुरु गरेको विषय हो भनी डिङ हाँक्ने तर मधेस टुक्रा–टुक्रा गर्न सहमति जनाउने प्रचण्डको यस्तो चरित्र सम्पूर्ण मधेसी जनताले बुझिसकेका छन्।
० शक्ति र पैसाका लागि मधेसीहरू जे पनि गर्छन् भन्ने प्रचण्डको आरोप सही होइन त?
– हो, हो 219 बिनापैसाको काम गर्ने त प्रचण्ड मात्र नै त हुन् यो मुलुकमा त्यसैले त उहाँ आज करोड होइन अर्बपति–खर्बपति बन्नुभएको छ। आफ्नो आङको जुम्रा नदेखेर अर्काको शरीरमा भैँसी खोज्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड। सत्रचोटि प्रयास गर्दा नसकेपछि मधेसीको सहारामा सरकार बनाउने अनि मधेसीलाई जथाभावी आरोप लगाउने? प्रचण्डका कुरा बिल्कुल गलत र भ्रामक हुन्। मधेसी दलले नै यो देशको रक्षा गरेका छन्, प्रचण्डजस्ता भौँजाहा बाटोमा हिँडेका विद्रोहीलाई शान्तिको बाटोमा ल्याएको पनि हामी मधेसी दलकै बलमा हो। आज शान्ति र संविधानका कुरामा देश अघि बढ्नुमा पनि मधेसी दलकै अहम् भूमिका छ। यो जगजाहेर छ, अब प्रचण्डजस्ताले अर्काको विषयमा बोलेको कसले पत्याउला?
० यसको मतलब आगामी चुनावमा माओवादीसँग तपाईंहरूको सहकार्य हुँदैन?
– हामीले सुरुदेखि नै प्रस्ट भाषामा भनिरहेका छौँ कि कुनै पनि लेफ्ट पार्टीसँग हामी चुनावमा सहकार्य गर्दैनौँ। मधेसमा हामी न वामहरूलाई बोकेर जान्छौँ न वामहरूको बुई चढ्न नै तयार छौँ। देशलाई शान्ति र संविधान चाहिएको, मधेसलाई अधिकार चाहिएको र त्यसका लागि माओवादीलाई ठेगानमा ल्याउनैपर्ने भएकाले मात्र हामीले उसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा ल्याउन मद्दत गरेका हौँ। उनीहरू अझै पनि सुधि्रएको व्यवहार देखाइरहेका छैनन् भने यस्ताहरूलाई बोकेर हामीले मधेसमा लैजाने त सवालै आउँदैन नि
० एमाओवादीसँग सरकारमा जानेबेला तपाईंहरूले प्रस्तुत गरेको चारबुँदे प्रस्ताव त कार्यान्वयन भएन नि? सरकारमा गएर तपाईंहरूले मधेस र मधेसीका लागि के गर्नुभयो?
– बिल्कुल गरेका छौँ। नागरिकतासम्बन्धी निर्देशन हामीले नै जारी गराएका हौँ, सेनामा सामूहिक भर्नाका लागि प्रयास गर्यौँद। यो देशको जो चरित्र देखिँदै आएको छ, त्यसभित्र अदालत पनि पर्छ। अदालतले हाम्रा ती प्रयासमा बाधा हाल्ने काम गर्योक। तर, हामीले उठाएका मुद्दा त्यसै सेलाउने खालका छैनन्, एक न एक दिन यी मुद्दाको सम्बोधन त हुनैपर्छ।
० तपाईंहरू एक मधेस प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले त बहुप्रदेशमै सहमति जनाउन थाल्नुभयो नि, किन?
– हामी आफ्ना नीति–नियम वा मुद्दाबाट पछि हटेका छैनौँ। सर्वप्रथम यो देशमा सङ्घीयताको मुद्दा उठाएर लड्ने हामी नै हौँ, जसका लागि हामी अझै पनि लडिरहेकै छौँ। जो हामीलाई विखण्डनकारी भन्दथे उनीहरू पनि आज सङ्घीयताको मुद्दा आवश्यक र उचित रहेछ भनी स्वीकार्न तयार भएका छन्।
० सङ्घीयताको मुद्दा ठीक रहेनछ, यो मुद्दा बोकेर अगाडि जान सकिन्न भन्ने आवाज पनि त उठेका छन् नि?
– यस्ता बेतुकका झिना–मसिना स्वरले केही लछारपाटो लगाउँदैन। यो दशमा मधेसी र जनजातिले बिनासङ्घीयता अधिकार पाउँदैनन्, बाँच्न सक्दैनन् भन्ने ध्रुवसत्य कुरा हो। त्यसकारण त्यो प्राप्त नहुँदासम्म हामी लड्न तयार छौँ र त्यो प्राप्त भएरै छोड्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ।
० तपाईंहरू मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीलाई चुनावमा ल्याउन किन पहल गर्नुहुन्न नि?
– हामीले के पहल गर्ने हो? आउनुस्, चुनावमा जाऔँ, संविधानसभामा आफ्ना मुद्दा र एजेण्डाहरू राखौँ भनेर त भनिरहेकै छौँ नि। अब हात समातेर ल्याउने कुरा त भएन बच्चालाई जस्तो…।
० गोलमेच सम्मेलनका लागि तत्पर भइदिएको भए हुन्थ्यो नि?
– के गर्ने त्यो गोलमटोल सम्मेलन गरेर? मङ्सिर ४ गते चुनाव नगराउनका लागि मात्रै हो त्यो गोलमेच सम्मेलन भन्ने सबैले बुझ्नु आवश्यक छ। खिलराजको सरकार अहिले नै भङ्ग गरेर मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ? ११बुँदे खारेज गरेर कसरी मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ? अनि के विषयमा गोलमेच गर्ने? आजका दिनमा गोलमेच सम्मेलनको कुनै औचित्य र सम्भावना छैन। गोलमेच सम्मेलन गर्ने नै हो भने संविधानसभा बनेपछि गर्दा हुन्छ, किनकि त्यतिबेला कसरी सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउने भनी सहमति जुटाउनका लागि त्यस्तो सम्मेलन लाभकारी नै हुनसक्छ।
० भनेपछि मङ्सिर ४ मै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको आशय हो?
– बिल्कुल 219 त्यो मितिमा चुनाव भएन भने यो देशमा कहिल्यै चुनाव हुन सक्दैन भन्ने हेक्का रहोस्।
२० भाद्र २०७०, बिहीबार २२:४५ मा प्रकाशित